Akeeka qabsoo QEERROO iraa kenname. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAkeeka qabsoo QEERROO iraa kenname.
Kanaafuu gaafa 01/11/2012 irraa eegalee tarkaanfiwwan fudhataman.
1.2 Ibsaa fi Bishaan Magaalaa finfinnee geessan hundiyyuu ni city.
1.3 Konkolaataan akka socho’u heyyamamuuf Ambulaansii dhukkubsataa deddeebisu qofa. inniyyu sakatta’iinsi godameefi darbuu qaba.
1.4Wajjiraaleen Mootummaa ummata dararuuf oolan kanneen akka waajjira gandaa, Buufata poolisii, wajjiraaleen nageenyaa, Biiroleen kantiibaa fi manneen qopheessaa hojii Diinummaa ummatarratti yoo geggeessan tarkaanfin qeerroodhaan irratti fudhatama. Kanaaf akka of sirreessanii fi aantummaa ummataa qabaatan itti dhaamna.
1.5 Milishoota gandaa gocha farrummaa ummataatirratti bobba’an irraa meeshaan hiikkamee jaarsolee biyyaatinnamoota leenjii loltummaa qabanitti akka hidhamu ni taasifama.
1.6 Namoota hojii basaasummaa hojjetan sirriitti adda baasun akeekkachiisa tokko booda yoo sirraawu baatan tarkaanfin madaalawaan irratti ni fudhatama.
1.7 Namoonni oromiyaa keessa guyyaa fincilli kun itti geggeeffamu kana keessa imalaaf baatan daandin waan hin jirreef rakkoo isinirra gahu hundaafuu isinumatu itti gaafatama.
2.1 Sirna Kufaa Jiru kanaaf jettanii ummata keessan hin ajjeesinaa.
2.2 poolisiin Oromiyaa fi ilmaan oromoo raayyaa Ittisa Biyyaa keessa jirtan Ummata keessan cinaa hiriirtanii dantaa ummata keessanii akka eegsiftanii fi ummata keessan akka baraartan waamicha obbolummaa isiniif goona.
1. Walitti bu’iinsi Sabaa fi amntii akka hin taasifamne of eeggannoo cimaan taasifamuu qaba.qabsoon keenya sirna waliin akka ta’e siriitti hubachuun isin barbaachisa.
Dhaamsa Qeerroo Oromoo maraaf
Waliif share godhaa
Furmaanni Amma oromoo baasu Qabsoo guutuu oromiyaatti Tokkummaan Roga maraan biifa haaraan itti mudduu qofa.
Qeerroo jirtuu jirra !!
Eessa jirtuu ??
Qeerroo forjedii kaayyoo Hin qabne teessoo fi garaaf kaattu muraasa qofatu qofatu adda bahee keessaa arca’e.
Qabsoon Qeerroo bilisummaa Maal irra jira? Gaaffiin Qeerroo deebii argatee ? Lakki Hin arganne.hoomtuu ? Eeyyeen omtuu Hin deebine.duuti nurraa dhaabatee? Lakkii
Maal ta’eeree qabsoon Qeerroo ??
Qabsoon Qeerroo butamee Waadaan Galame ganamee Abiy Oromiyaa diigee Sirna Nafxanyootaa nutti deebisaa jira.
Qeerroo fi warri qabsoo kana fide asiin gahe eessa jiruu ??
Sanqallee fi-Maakalaawwii dhoksaa .
Maasaraa Mootummaa Bakka garaa garaatti .
maqaa Koroonaa vaayirasiin duulli oromoo irratti labsamuu.
ajjechaa,saamicha,Mana qotee bulaa gubuu.
Qeerroowwan ciccimoo jijjirama kana fidaniif qabsa’oota adda duree jilmaan hidhuu kkf.
Haarsaan lubbuu barootaaf kaffalmae fi Dhiigni dhangala’e bilaasha badee ?? Hin badu.
Deebitee Garbummaa jalatti bultaa ?? Hin bullu.
maali falli Amma ??
Obsaa fi kadhaa dhiifnee Akka guutuu oromiyaa tti Qabsoo
Itti muddii dha falli.-Amma Dursa Ajjandaan keenya Maal irraa kaanu Qeerroo ??
1ffaa,Dursa Ajjeechaa ,hidhaa,Mana gubuu Mootummaa shiftaa shororkeessaan Bakka garaa garaa irraatti raawwachaa jiru odoo lagaan wal Hin qoodnee Waliif birmachuun tokkummaan dhaabbanne falmachuu.
2ffaa, Jawaar Mohammadi Baqqalaa Garbaa Jaal Abdii Raggaasaa dabalatee Qeerroowwan fi Hidhamtoonni siyaasaa hundi Amma akka Gadlakkifaman gochuu .
3ffaa,Qabsoon kana boodas bifa qinda’ee fi wal irraa Hin cinneen keesaa fi alaa Gamtaan falmanne Garbummaa Yaroo dhumaaf oromiyaa keessaa hundeen buqqifnee Bilisummaa fi Walabummaa oromiyaa mirkaneessuun Daangaa oromiyaa Ni tifkanna !!
yoom irraa kaasee itti calqabnu Qeerroo ??
Atattamaan bifaa haraan wal ijaarree Yaroo muraasa booda Qeerroo hundi Bakka jirruutti ,Araddaa fi Magaalaa keessa jirruu calqabuun waliif labsuun tokkummaan kaanee akkuma sochii Qeerroo guutuu oromiyaa tti waggoota lamaan dura gochaa turree sana itti fufu dha.
Karaa nagaa Opdof obsinus ,kadhannus ta’uu dideera .
Kanaafuu kadhaan omaa nu Hin fidne. Bara TPLF caala gochii daran ammaataa gocha suukkanneessaa waraana Mootummaan fudhatamuun reenfi oromoota waraabessaan nyaatamaa fi qabeenyaan qotee bulaa mana waliin gubachaa jira.
Kana booda waanti Opdo gaafannuu fi irraa eegnu dhumateera .
Gaaffii oromoof Opdo ykn qaamni biroo kana booda gaafannu Hin jiru.
Ofuma keenyaaf akka guutuu oromiyaatti Qabsoo itti mudduun gaaffii keenya ofumaaf deebifanna.Nagaa fi tasgabbii oromiyaas ofuma keenyaan Mirkanneffanna.
Hundi keenya Bakka jirrutti of qopheesssa.
Hanga dandeenyutti oromoon hundi meeshaa waraanaa kan Aadaa irraa calqabee hanga qawwee tti hidhachuun dirqama yarooti
Mootummaa dullatti kanaan Gochi suukkanneessaan Abdii murannaa ijibaataaf oromoo irraatti raawwatamaa jiru Dabaree dabareen guutuu oromiyaa gahaa jira.
Akka Hoolaa yammuu tokko biraa qalamu tokko dhaabbatee ilaalaltii sana keessaa haa baanu.
Kan ijaaramee tokkummaan falmate inuma injifata.
Hunduu qooda Qabsoon oromoo si gaafatu ba’i.
Teessee quba namatti Hin qabiin.
Ji’oota muraasa boodas Abdii qabna inuma Injifanna !!
Yeroo dhumaa tiif Garbummaan oromiyaa keessa Ni buqqaati ! Oromoon galaana irra dhangalaana.
Oromoonni biyya Libaanon jiranis dhiibbaa biyya Arabaa dandamatanii bifa kanaan sagalee isaanii dhageessisan.